Lejupielādēt PC Repair Tool Priekš Windows
Lejupielādēt PC Repair Tool,
Ithuluzi Lokulungisa i-PC (i-Outbyte PC Repair) uhlelo lokuhlanza, ukusheshisa kanye nokuvikela abasebenzisi bekhompyutha beWindows. Ithuluzi Lokulungisa I-PC, eliphakathi kwezinhlelo ezithembekile zokulungisa i-PC, alixazululi nje kuphela inkinga yokwehla kwikhompyutha yakho, kodwa futhi lisiza ukuvikela ubumfihlo bakho futhi liqinisekise ukuthi uhlelo lwakho lusebenza ngokufanayo ngokuqhubekayo. Uma ukhononda ngokuncipha kwekhompyutha yakho futhi ufuna uhlelo lapho ungathola khona imininingwane eningiliziwe mayelana nohlelo lwakho futhi uluqaphe ngokuqhubekayo, ngincoma kakhulu lolu hlelo lokulungisa, ukulungisa nokuhlanza uhlelo.
Noma ngabe unohlelo oluhle lokuphepha, amakhompyutha weWindows azoncipha ngokuhamba kwesikhathi, ibhethri lakho lizoshoda, izinhlelo zizoqala ukushayeka, ngeke sibe khona isikhala esanele kwi-hard drive yakho futhi uzosala nezinkinga eziningi. Uhlelo lokulungisa i-PC oluphephile lwe-Outbyte, iThuluzi Lokulungisa I-PC, wuhlelo lwephakeji olunikeza izixazululo zezinkinga wonke umsebenzisi weWindows PC angahlangabezana nazo. Uma ngikhuluma ngezici ezivelele zohlelo oluseqophelweni lokugcinwa kwesistimu oluthandeka kubasebenzisi bawo wonke amazinga ngokusebenziseka kwalo okucacile komsebenzisi:
Ithuluzi Lokulungisa I-PC (Izici Zokulungisa i-Outbyte PC) Izici
Iskena ngokuphelele isistimu yakho ye-Windows: Ukulungiswa kwe-PC kwenza isheke eliphelele lesistimu yakho yonke, kuthungathwa amafayela angenamsoco, izingqinamba zokuxubana, nezimbangela zezinkinga zesistimu noma zohlelo lokusebenza nokuphahlazeka. Izinkinga zisuswa ngokuphepha ngaphandle kokulimaza uhlelo lwakho lokusebenza.
Ihlanza amafayela angenamsoco: I-PC ehlanzekile isho ukukhiqiza okungcono. Imodyuli yokuhlanza ekulungiseni i-PC ishanela uhlelo olungadingekile namafayela wesikhashana womsebenzisi, i-cache yesiphequluli sewebhu, amafayili wokubhalisa angasetshenziswanga, amafayili wesikhashana we-Sun Java, amafayela asele we-Windows Update, i-cache ye-Microsoft Office engadingekile, nokuningi. Kukusiza ukuthola kabusha ama-gigabytes wesikhala sediski enzima.
Kuvikela ubumfihlo bakho: Uhlelo lwakho luphephe kakhulu kubaduni. Iningi lethu likhathazeka ngemininingwane yomuntu siqu ewela ezandleni ezingafanele. Faka amaphasiwedi noma imininingwane yekhadi lesikweletu futhi le datha ingagcinwa kwi-hard drive yakho, engabonakali kuwe kepha isigebengu esinekhono singakuthola kalula. Amathuluzi obumfihlo e-Outbyte akusiza ukuthi ususe imikhondo yemisebenzi yakho futhi uvikele imininingwane yakho ebucayi.
Ithuthukisa isivinini sekhompyutha: Izinto eziningi kukhompyutha yakho zizosebenza ngokushesha okukhulu! Ukulungiswa kwe-PC ekugcineni kuzama ukwengeza izilungiselelo zohlelo ukusiza ikhompyutha isebenze ngokushesha okuncane. Ingaguqula izilungiselelo zokuxhuma kwe-inthanethi ngokushelela okuphequlula i-inthanethi, ukulanda ngokushesha nekhwalithi yekholi yomsindo / yevidiyo engcono.
I-Scans PC: Ithuthukisa ukuvikeleka ekutshontshweni kobunikazi nakwezinye izindaba zokuphepha Uhlelo luhlola ikhompyutha yakho ukuthola izinhlelo namafayela okungenzeka angadingeki, kufaka phakathi i-Task Scheduler, izengezo zesiphequluli (izandiso) ne-registry, okukuvumela ukuthi ubuyekeze izinto ezitholiwe bese uzisusa ngokuphepha uma kunesidingo.
PC Repair Tool Specifikācijas
Jaunākais atjauninājums: 03-07-2021